Tuesday January 15, 2019 - 10:49:07 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxa beryahan aad loo hadal hayaa in Maraykanku ka baxayo meelo badan oo uu awal ku lugo ballaarsaday isaga oo is bidaya awood dhaqaale iyo mid ciidanba. Siyaasiintii soo maray Maraykanka ee labadii qarni ee tagay ayaa dejiyey qorshe siyaasadeed, mid
Waxa beryahan aad loo hadal hayaa in Maraykanku ka baxayo meelo badan oo uu awal ku lugo ballaarsaday isaga oo is bidaya awood dhaqaale iyo mid ciidanba. Siyaasiintii soo maray Maraykanka ee labadii qarni ee tagay ayaa dejiyey qorshe siyaasadeed, mid ciidan iyo mid dhaqaaleba taas oo ahayd in ay caalamka ku qabsadaan waxa loo yaqaan sumcad (prestige) ciddii diiddana ay ku sanduleeyaan rabitaankooda, waxa ayna dejiyeen dhammaadkii qarnigii 19aad (1875) aragti la yiraahdo American grand strategy, taas oo ahayd in dunida kale la qabsado saddex aag ayeyna xoogga saareen.
Waxa ayna ka la yihiin Bariga fog ee Aasiya oo Maraykanku rumaysnaa in ay ka soo baxayaan imbaradooriyada khatar ku ah jiritaanka Maraykanka, sida tii Jabaanka. Bariga Dhexe iyo gacanka Carabta oo uu rumaysnaa in la isugu imaan doono khayraadka shidaalka ee ku jira wixii hadda ka dambeeyana aad loo adeegsan doona awoodda tamarta shidaalka (petrol era).
Yurub oo iyana u muuqatay meelo ay ku hardamayaan Qaysarro awood la soo bixi doona dabadeedna khalkhal amni iyo mid dhaqaaleba gelin doona danaha Maraykanka. Haddaba maanta waxa muuqata in uu bilaabay in uu dib u gurasho sameeyo, waana sooyaal siyaasadeed haddii nidaam dunida mar ugu awood badnaa (hegemony) uu dib u gurasho sameeyo waxa la isugu tagaa meeshii uu ka soo duulay oo ah rugtiisa, marka waxa aan rajaynaynaa in dalka Maraykanka la isku qabsado oo la isugu tago sida marar badanba ka dhacday taxanaha siyaasadda caalamka (world political history) oo kuwo isaga ka horreeyey, oo aynnu ka tilmaami karno Isbaanishka, Faransiiska iyo Jarmalka oo ugu dambeeyaba meeshii ay ku soo gabagabowday awoodoodi waa aynu aragnaa maanta.
WQ: Suldaan Maxamad Gar Yare
Sarkaal katirsan ciidanka DF oo laga helay cudurka Carona Virus.
Shirkadda Hormuud oo ku guuleysatay Shahaadada Caalamiga ah ee Taya-Wanaagga
Al Shabaab oo qarax ku dilay taliyihii Booliska degmada Afgooye iyo askar ilaala u ahaa.
Warar dheeraad ah oo laga helay duqeyn dhowaan lagu qaaday Xerada Xalane.
Dhageyso: Xal laga gaaray Khilaaf dhuleed oo udhaxeeyay beelaha Xawaadle iyo Abgaal.
Wasiirka Difaaca Mareykanka oo lakaraantiilay kadib markii kaaliyaashiisa laga helay Carona.